Barri bara bilisummaati: Aartistoota Oromoo - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Aartistoota Oromoo biyya galaa jiran
Baqaan biyyaa bahanii waggoota hedduu biyya bakkee erga jiraatanii booda Aartistoonni Oromoo gameeyyiin kanneen akka Ilfinesh Qannoo, Hirphaa Gaanfuree Burqaa, Tottoobaa Taaddesee Margoo, Haayiluu Kitaabaa, Elemoo Alii, Umer Suleyman fi Kadir Sa'id gara biyyaa deebi'uuf karoora akka qaban beeksisaniiru.
Jila Hooggantoota Olaanoo Adda Bilisummaa Oromoo waliin Fulbaana 15, bara 2018 biyya galuun akka bohaarsan beeksisan.
Aartistoonni kunneen sababa quuqqaa sabasaanii baasanii dubbataniifi mirga sabasaaniif falmaniif mootummaadhaan sodaachifamuun dhiibamanii akka biyyaa bahan dubbataniiru.
Bara 1998 baqattee karaa Moyyaalee keeniyaatti baqachuu achumarraan ammoo biyya Noorwayii galuushee kan dubbattu Aartisti Ilfinash Qannoo''Eelaa mootummaan Itoophiyaa narraan ga'e baachuu gaafan dadhabun lubbuu koo baafadhe.''jetti.
Miidhaan uleen wayyaanee irraan ga'e fayyaa dhabsiisuu kan dubbattu Ilfinash Qannoo, ''Rakkoo narra ga'e sabakootti himachuufin gala. Uummata koo guyyaa tokko argadhee dhungadhee yoon du'ellee homaa natti hin fakkaatu.'' jetti.
Geerarsaa fi sirboota qabsootiin sabashee bohaarsuuf ammallee fedhii hamilee akka qabdus dubbatteetti.
''Dhaabbadhee sirbuu yoon dadhabellee teesumarra taa'een saba koof geerara, nan dhaadadha. Ijoollee kootu kanaan na dhaga'e. Galanni kan qeerrooti'' jechuun sadarkaa qabsoon Oromoo amma irra ga'ee jirullee jajjabeessaa ta'uu dubbatti.
Jalqaba bara 1999 hidhaa fi ajjeechaa baqatee biyyaa bahuusaa kan dubbatu Aartisti Hirphaa Gaanfuree Burqaa, wallee mata duree ''Bosona Baaleetiin'' mogga'erratti wayita mootummaan Itoophiyaa nageenyummaa koof na sodaachisettin baqadhee biyyaa bahe .'' jedha.
Ergasiis sirboota qabsoo Oromoo deggeran, kanneen qeerroo Oromoof hamilee guddaa ta'an hojjechaa ture, wallee'' Jiraachuu dhiisnus wal bira, yaadnikoo isin bira jedhufaa'' akka fakkeenyaatti kaasuun nutti himeera Hirphaan.
Qaanqeen qabsoo yeroo isaan biyya jiran qabattee turte ittumaa babal'atee har'a oromoo bakka hundaa tokko ta'ee Oromiyaarratti walarguuf deemna. Kana hundaaf galanni kan qeerrooti.'' jechuun haala gara biyyatti isaan deebise ibsa Hirphaan.
''Gareen Aartistootaa kun sirboota ummanni keenya ittiin nu beekuu fi jaallatu kan tokkumaa saba keenyaa cimsan dhiyeessuuf deema, ummata keenya waggoota hedduuf irraa adda baanee turres ni daawwanna.'' jedheera Hirphaan.
Bara haaraa fi Bilisummaa
Image copyright Feesbuukii Ilfinash Qannoo
Goodayyaa suuraa Aartisti Ilfinash Qannoo
Ummanni Oromoo bu'aa bayii hedduu keessa darbe as ga'eera, barri haaraan kun ammoo bara bilisummaati jetti Ilfinash.
''Keessumaa barri darbe bara walmakaa ture, qabsoo hamaa fi injifannoo raajidha.'' kan jettu Aartist Ilfinash Qannoo ''Barri baranaa bara ummata Oromoof ifa fidee dhufuudha.'' jetti.
''Jijjiirraa baraa fi bari'uu birraa qofa osoo hin taane ummata Oromoof ifi wayii mul'ateeraaf.'' jetti.
''Birraa birraa ililliitu daraara, birraa baranaammoo bilisummaatu daraaree ija godhachuuf deema.'' jette.
''Birraan baranaa kan yeroo kamiyyuu caalaa sabni Oromoo gammachuu keessatti argatuudha. Gaddaa fi dukkana bara dheeraa gammachuu fi ifatti kan jijjiirratuudha. Kanaaf ammoo tokkummaan cimuu qaba.'' jechuun gorsa dabarsiteetti Ilfinesh.
Image copyright Feesbuukii Hirphaa Gaanfuree
Goodayyaa suuraa Hirphaa Gaanfuree Burqaa
Aartisti Hirphaa Gaanfuree Burqaa ''Ce'umsi kun kan bara 2010 irraa bara 2011tti taasifamu qofa osoo hin taane, Ummanni Oromoo hacuuccaa waggoota 27 darban keessa ture kan itti ofirraa fonqolchu ta'ee natti mul'ata.'' jedha.
''Barri haaraan kan tokkummaan Oromoo keessatti cimu, kan Oromoon kutaa Addunyaa mara irraa walitti dacha'uudhaan dhimma biyyasaarratti yeroo kamiyyuu caalaa hojjetuudha.'' jedha Hirphaan.
''Waggoota hedduuf jireenya baqaa keessa teenyee kan dharra'aa turre arguuf jirra. Dachee keenya Oromiyaa irratti dhalannee irratti guddanne hawwaa jiraachuu ture hireen keenya. Amma garuu birraan ifaan nuuf bari'eera. Qeerroo waliin taanee Irreecha halaala teenyee hawwaa turrellee kabajuuf jirra. An gammachuudhaan waanan kufun se'a, birraa baranaa.'' jechuun gammachuusaa ibseera Aartisti Hirphaa Gaanfuree.
Weellisaa Daawwitee Mekonnen gamasaatiin garee Aartistoota amma biyya galan waliin gara biyyaa imaluu baatus fuulduratti gara biyyaa deebi'uuf karoora akka qabu BBCtti himeera.
Aartistoonni kunneen Baandiiwwan hundeeffamasaaniirraa eegalanii keessaa hojjechaa turan akka yaadatan, akka bakkatti deebisanis dubbataniiru. Akka fakeenyaatti Baandii Gadaa fi Baandii Bilisummaa kaasan.
Sanbata dhufu walargaan Finfinneetti jedhu Aartistoonni kunneen.
'Abdii fi sodaa Dhaabni Mirga Namoomaa Itoophiyaarraa qabu'
Loltoonni Zimbaabwee 'itti karoorsanii ummata gidirsaa jiru'
Daandiin Xiyaara Itoophiyaa Moqaadishootti balali'uu addaan kute
Murtii yunivarsiitii Adaamaa hordofee barattoonni qe'eetti galaa jiru
Dhimmi Afrikaa Faransaayiifi Xaaliyaanii waldhabsiise